စိတ်ညစ်ခြင်း – PoemsCorner
In: ကဗျာ Posted By: butterfly (တောင်ပံမဲ့ လိပ်ပြာ) Date: Jan 7, 2011
ချစ်ရယ် . .. စိတ်ညစ်ပြီလား
မျှော်လင့်ခြင်း ၀န်ရိုးစွန်းဆီသို့ လည်ပြန်ငေးကြည့်ခြင်း…. (Terry)
ချစ်ခြင်း ယုံကြည် မျှော်လင့်ခြင်းကြီးစွာဖြင့်………………………………..
Leave comment 15 Comments & 408 views
ကိုလိပ်ပြာတို့ ညစ်တွန်းတွန်းနေပီ ဗျို့….
By: nyo at Jan 7, 2011
ဟားးးးးးးး ကိုလိပ်ပြာတို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီး…
By: genius.jinx28 at Jan 7, 2011
By: butterfly (တောင်ပံမဲ့ လိပ်ပြာ) at Jan 7, 2011
ဟားဟား ဒါမှ ကိုလိပ်ပြာကွ…….
By: linn at Jan 7, 2011
သူများမ၇ယ်နိုင်တာကို သူက ၇ယ်နေသေးတယ်
လိပ်ပြာလည်း ညစ်လုံးလုံးနေပြီ :P:P:P
By: အသဲကွဲမိုး at Jan 7, 2011
အဲလိုဟုတ်ဘူး လင်းတင်ပြီးမှ ကိုလိပ်ပြာ comment ကပေါ်လာတာ …….. အထင်မလွဲပါနဲ့
By: mainkalay at Jan 7, 2011
By: homerungirl1 at Jan 7, 2011
အမ်…. အစ်ကို ညီမလေးကို ပြောတာမဟုတ်ရပါဘူးဗျာ… တစ်မျိုး မတွေးပါနဲ့… ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်ညစ်လွန်းလို့ ရေးလိုက်တာပါဗျာ……….
စိတ်မညစ်ပါနဲ့…a zaaza fighting !!!!!
ကျေးဇူးပါ သဲရေ … ဒီက ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ အားပေးမူ့ကြောင့် နည်းနည်းတော့ လျော့သွားတယ်ဗျာ… အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်……
ညစ်လုံးကိုဘယ်လိုဖြည်ရမလဲ……… 🙂 ။
By: ကဗျာချစ်သူ at Jan 7, 2011
ကလေးတွေခြား ဆရာဝင်လုပ်လိုက်ဦးမယ် ကျနော့ ဆ၇ာ အမြဲ ဆုံးမတဲ့ စကားပါ စိတ်ညစ်တယ် လို့ ဘယ်တော့မှ မပြောပါနဲ့ တဲ့ လ့ူစိတ်က ကိုယ်ပြောတာကို လက်ခံတယ်လေ တကယ် မညစ်တောင် အလိုလို စိတ်ညစ်သွားတတ်တယ်။ပါးစပ်ကနေ ငါစိတ်ညစ်တယ်ဟာ လို့ ဘယ်တော့မပြောမိအောင် သတိထားပါ တဲ့။
By: dan at Jan 7, 2011
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဒန်ရာ ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်း ကြားဖူးတယ် မရှိစကား ညစ်စကား မပြောရဘူးတဲ့ဗျ၊ ဒီနေ့ ညစ်တာ တခြားဟာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ အလုပ်ကြောင့်ပါ……….. ပေါက်ကွဲတဲ့ စိတ်တွေ ဖြေတဲ့အနေနဲ့ ၀င်ရေးလိုက်တာပါဗျာ။ ဘာပဲ ပြောပြော ကျေးဇူးပါဗျာ ကိုဒန်မှာ ရှိတဲ့ ဆောင်းပုဒ်လေးနဲ့ ဆုံးမစကားတွေကိုလည်း အလျဉ်းသင့်ရင် သင့်သလို ၀င်ပြီး share ပေးပါဗျာ။။